Bulsho kasta Baaba'eedu Wuxuu Bilaabmaa Marka aqoonta la musuq maasuqo ( Academic Fraud ) Qalinkii A/rahman fidhinle UK.
Saturday June 09, 2018 - 09:05:52 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Guud ahaan dugsiyada Somaliland ee madaniga ah ama dowliga ah ayaagaadhaya1284dugsi oo isugu jira Hoose/ Dhexe iyo Sare. Tirada guud ee ardayda wax ka barata dugsiyadaasiwaa400,000kun ooarday. Tirada macalimiinta wax ka dhigta dugsiyadaa dawliga ah ayaagaadhaya10,000,taas oo6640macalin ooka mid ahiay pay role ka mushaharka ku jiraan inta kalenaay dabeyshaafka u dhigtaan ama ay ka sugaan mushaharkooda Hayado, qurbe joog amaardayda wax aybaraanlacag yarloogaururiyosi aymushahar uga dhigtaan, kuwaas oo aan helinmacalimiintaasibil walba mushahar sugan oo ay ku xisaabtami karaan bil kasta. Arintani waxay keentayin macalimiintu niyad jabaan ooayhoos udhacdo tayadii waxbrasho, kalsoonidii, qiimihii iyo karaamadii uu macalinku dalka ku lahaan jiray.
In kasta oo Miisaaniyada Wasaaradda Waxbarashadaay Xukuumadihii kala danbeeyey gaadhsiiyeeen ilaa$14 .5 Millionsanadkiiba,hadana waxaajiradhibaatooyin fara badanoo ku gedaamanbahda waxbarashada Somalilandgaar ahaan macalimiintadhamaan dugsiyada Hoose /Dhexe iyo Sareee dawliga ah. Dhibaatooyinkaa waxaa ka mid ah:
1-Tayadii waxbarashada oo aadu liidatagaar ahaan dugsiyada Tuulooyinka iyo Degmooyinka qaarkood sida kuwa xeebahadalka.
2- Dugsiyada Hoose /Dhexe ooaqoontii macalinka iyo tii ardayguisa soogaadheen taas oo tayadiitacliinta fashilisay
3- Badanka macalimiintu tayo ma laha,mana helaan mushahar ku filan,mushaharkii macalimiinta wuxuu aad uga yaraaday mushaharkaJaariyadaha xaafadahataa soo macalimiintii aad u niyad jebisay.
4- Hayadihii dugsiyada qaarkoodxaga mushaharka ka caawin jirayoo wada shaqeyntii iyo gunooyinkiiba joojiyey sida Hayada "Global Partnership for education, Well Fisher iyo Grand/Sea ".
5-Nasiib daro tacliinta JSL qawaaniinteedii lagu hagi lahaa laguna maamuli lahaa ma shaqeeyaan(there is no active education policy )
6- Waxaaiyanatiro ahaan isa soo gaadhaya tirada Jaamacadahafaraha badan eecaasimada ku yaalaiyo tirada dugsiyada sare eeCaasimada,taasina waa rikood cusub oo JSL jebisay. Tusaale ahaan Hargeisa waxaa ku yaala38 jaamacadood oo aan qorshe qaran ku iman iyo 45 Dugsi sare oodawli iyo madani isugu jira.
7-Wasaaradu ma laha hab dhameystiran oo lagu qiimeeyo waxbarashada dugsiyada dalka oo dhan ( there is nocomprehensive quality insurance)
8- Bay'ada waxbarashada ee dugsiyada badankoodaoo aad u liita taas oo aanay dugsiyadu wada laheyn biyo nadiif ah oojoogto ah iyoleydh joogto ah, waxaa iyana lagadayrinayaanadaafadxumo xaga sanitation ka oo dugsiyadoo dhan ah.
9-Waxaa dugsiyada badankooda ka jiradhameyn la'aanmanhaj ( Curriculum gap ) taasoo ardeydu aaney duruusta ku dhameyn waqtigii loogu talo galay macalin xumo iyo maamulxumo awgeed.
11-Degmooyinka iyo Tuulooyinkaqaarkood ardeyda silsilada waxbarashadu ayaa ka kalago'da duruufo dhaqaale iyo maareyn la'aan iyotaloxumaan awgeed.
13- Waxa laga shaqeysiin waayey Shuruucdii Waxbarasha JSL eehore loocuriyey sidaSomaliland Education Act 2007, Somaliland Education Policy 2005 iyo Somaliland Teachers Policy 2006.
Dhamaan qodobadaa faraha badan eesare ku taxani waxaysababeen in uu musuq-maasuq baahsani dhuuxa ka qalo nidaamkii guud ee tacliinta JSLgaar ahaan Dugsiyada Hoose/Dhexe iyo Sare ee dalkaoo dhan , Waxaa dugsiyada iyo Jaamacadaha Somaliland badankooda ka dhaca Musuq maasuqan hooseee tirada badan:
1-in ardaydu ay grade iibsadaan oo lacag laaluush ah ku bixiyaan.
3- in ardeyguuu laaluush bixiyosi shahaadada dusiga sare loogu fududeeyo isaga oo aanwaxabarashada dhameysan.
9- In la aas-aasay dugsiyo private ah oo badaniyo Jaamacado aan ku imanqorshe qaranku waas oo ay wax kuleeyihiin qaarkood kuwii
Masuuliyada waxbarashada qarankahore loogudhaariyey ee loo igmaday inay bud-dhigaan.
10 - In ardaygu uu laaluush bixiyo si uu Jaamacada isaga galo isaga oo aan soo dhameysan jaranjaradii waxbarasho.
11- in ardeyda qaar bixiyaan laaluushsi loogu ogolaadoin ay 3 sanadood ku dhameystaan waxbarashada dugsiga sare
12- In ardeydu bixiyaan laaluush si ayuga boodaan fasalka 8-aad ee dugisga dhexe oo aytoos ugu galaan Dugsiga sare.
Aqoontu waa ruuxiyaadka hogaamiya binu-adamka taas oo shaqsiga hayaanka horumarkiisa ku hagta kuna hanuunisa. Waxabarashadu waa xuquuq aas aasiya waxaanay kobcisaa oo balaadhisaa caqliga iyo karaamada shaqsiga, waxay qaabeysaa nolosha qofka, waxaana ayu horseedaa in qofku uu gaadho horumar iyo badhaadhe uu noloshiisa horumar ku gaadhsiiyo. Maanta Somaliland waxaabaaba'ay noloshii macalinka maadaama uu musharkii macalinku uuka yaraaday mushaharkashaqaalaha guryaha nadiifiya taas oo macalinkii iyo maamulihiisiiba ku kaliftay inay laaluush ardeyda ka qaataan si ay u noolaadaan.
Bulsho kastaa Baaba'eedu wuxuu ka bilaabmaa marka aqoonta la musuq maasaqo ee cilmigalaaluushla kala siistoama la ciideeyotaas oo sababta in ummaddu ay caqliga iyo cilmigaka maqaar siibato, Waana xaalada ay maanta Somaliland ku sugan tahay hadii aan laga gurman oo aan la dabo qaban sida ugu dhakhsaha badan.
Gunaanad:Waxaa Xukuumada looga fadhiyaa in ay ka shaqeysiiyo Qorshaha Shanta sanood ee waxbarashada JSL (2017 - 2021 ESSP). Waxaana lagasugayaa in ay soo nooleyso xidhiidhkii wada shaqeyneed ee hayadihii la shaqeyn jiray Wasaarada Waxbarashada oo hada ka aamin ka baxayWasaaradda waxbarashada una wareegay in ay la shaqeeyaan ururada bulshada kuwaasoo ka kabi jiray Macalimiintadhinaca tababarada iyogunada.Waxaana looga fadhiyaa Wasaaradda in ay dar dar geliso barnaamijkii dib utayeynta Waxbarashada iyo tababarada macalimiinta.
La soco qaybaha danbe..............!!
IntensiveEducation Advisor ED PA